» डिपुटी सिईओ भट्टराई भन्नुहुन्छ,’सीईओले राजीनामा दिनु भएको छैन्’
पछिल्लो ५/६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा कान्छो बैंक सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेड भित्र लफडा भएको, सिईओले राजीनामा दिएको भन्ने व्यापक रुपमा बजार हल्ला चलेपछि बैंकका बारेमा चलेको हल्ला के हो भन्ने बारेमा भुपेन्द्र आचार्यले डिपुटी सिईओ जीवन भट्टराईसँग गरेको छोटो कुराकानी :–
सिईओ अनुजमणि तिमिलिसनाले राजीनामा दिएको हल्ला छ नी ?
हाम्रो बैंकका सिईओ अनुजमणि तिमिलिसना राजीनामा दिनु भएकै पनि छैन । बजारमा जे जस्ता हल्ला आएनी सबै असत्य र निराधान हुन् । उहाँ खुट्टाको अप्रेशन गर्न भारत जानु भएको चाहि सत्य हो राजीनामा दिनु पर्ने कारण छैन् । यो पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छु उहाँले राजिनामा दिनु भएकै छैन् ।
एकाएक किन यस्तो हल्ला आयो त ?
हेनुहोस् बजार सानो छ सबैले बोल्ने र लेख्ने छुट छ । कसैलाई रोक्न सकिदैँन् । उहाँ विगत ४÷५ महिना देखि भारतमा उपचार गर्न आउने जाने क्रम चलेको छ । यसले पनि हल्ला गर्न सजिलो भएको होला जस्तो लाग्छ । तर आन्तरिक केहि समस्या छैन् ।
बैंकको नाफा कम भए पछि लफडा सुरु भयो भनिन्छ नी ?
यस्तो होइन ४० करोड नाफा राम्रो हो । मर्जर गरेर पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने हामी लागी परेका छौं । बैंक बचाउने काम भयो नाफा कमाउने कुरा त छदैँछनी, राइट शेयर बजारमा पठाएका छौं । अब २ वटा संस्थासँग मर्जर गर्दैछौं नि । काम भइरहेको छ । बैंकको अवस्था सुधृढ छ । बैंकको भविस्य राम्रो छ । बैंक आन्तरिक सुशासन,बैंकका सबै सुचक सकारात्मक छन् ।
मर्जर कहिले सम्म होला ?
दशौं अगाडि नै मर्जर गर्न हाम्रो विशेष साधारण सभा बोलाएका छौं । अल्पाइन डेभ्लप्मेन्ट बैंक र सेती फाइनान्स संस्था मर्जरपछि ८ अर्ब पुर्याउने छौं ।
माथिल्ला स्तरका कर्मचारीले बैंक छाडेको त सत्य हो नि ?
बैंकमा अवसर पाएपछि आउने जाने क्रम स्टाफमा हुन्छ । हाम्रो बैंकमा पनि त्यही भएको हो ।
अन्यमा केही छ ?
हाम्रो बैंक ८ अर्ब पुँजी सहितको बैंक बन्दै छ । बजार हल्ला जस्तो केही भएको छैन् । बैंक राम्रो छ हामी मजबुत र सक्षम बैंक बन्दै छौं । हाम्रो बैंकको बिशेष साधारण सभा आउदोँ २३ गते शुक्रबार हुदैँ छ । थप कुरा सो सभाले गर्ने छ । न्यूज अभियान डट कमबाट ।